မျက်စိစွံတာကိုသက်သာစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း(၈)သွယ် - For her Myanmar
လူတော့ စွံမစွံ မသိဘူး.. မျက်စိကတော့ အသေစွံတယ် -_-
မျက်စိစွံတယ်ဆိုတာ ဝက်ခြံလို အနီရောင်အဖုက မျက်ခွံပေါ်မှာ ပေါ်လာတာကို ခေါ်တာပါ။ မျက်ခွံမှာ အထူးသဖြင့် မျက်တောင်မွေး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဆီအိတ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အရေပြား ဆဲလ်သေတွေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ အဆီတွေ စုလာရင် အဆီအိတ်တွေကို ပိတ်မိသွားသလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဆီအိတ် ပိတ်သွားရင် ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေက အထဲမှာ ပေါက်ပွားလာပြီး မျက်စိစွံလာတတ်ပါတယ်။
ကဲ.. ဒါဆို မျက်စိစွံရင် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ခံစားရတတ်လဲ???
မျက်စိစွံရင် ခံစားရမယ့် လက္ခဏာတွေကတော့-
မျက်ခွံပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဖတ်တွေ ထွက်တာ
မျက်လုံးအောင့်တာ၊ မျက်လုံးယားယံတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စိစွံတဲ့အဖုက မနာရင် ရိုးရိုးအဆီအိတ် ပိတ်တဲ့ မျက်စိစွံအဖုလိုပဲ ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ မျက်စိစွံတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်စိအဆီအိတ် ပိတ်တဲ့အဖုပဲဖြစ်ဖြစ် ကုသမှုက တူပေမဲ့ မျက်စိအဆီအိတ် ပိတ်တဲ့အဖုက ပျောက်ရတာ ပိုကြာတတ်ပါတယ်။
မျက်စိစွံတာကို အမြန်ဆုံး သက်သာစေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကတော့-
မျက်စိစွံတာအတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ရေနွေးဝတ် ကပ်ပေးတာပါ ယောင်းတို့ရေ… အပူကြောင့် ပြည်တွေက မျက်ခွံထိပ်ကို ရောက်လာပြီး ပြည်နဲ့ အဆီတွေ ရောသွားလို့ ပြည်ရည်တွေ သူ့အလိုလို ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။
ကဲ.. ဒါဆို ရေနွေးဝတ်နဲ့ ဘယ်လိုကပ်ကြမလဲ… အရင်ဆုံး အဝတ်ကို ရေနွေးဆွတ်တာက စရမှာပေါ့နော်။ ရေနွေးဆွတ်တဲ့အခါ ရေအရမ်းမပူအောင် သတိထားပါနော် ယောင်း.. ပြီးတော့ အရမ်းကြီး မရွှဲစေဘဲ စိုရုံလောက်ပဲ ဆွတ်ပေးရင် ရပါပြီ။ အဲဒီ ရေနွေးဝတ်လေးကို (၅)မိနစ်-(၁၀)မိနစ်လောက် မျက်လုံးပေါ်မှာ အသာအယာ ကပ်ထားပါ။ သတိထားရမှာကလေ မျက်စိစွံတဲ့ ပြည်ဖုကို ညှစ်ထုတ်၊ ဖောက်ထုတ်ဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့ ယောင်းရေ… ပိုးဝင်ပြီး ပိုဆိုးသွားနိုင်လို့ပါနော်.. ဒီလို ရေနွေးဝတ်ကပ်တာကို တစ်နေ့ကို သုံး၊ လေးကြိမ်လောက် လုပ်လို့ ရပါတယ်။
(၂) ဆပ်ပြာအပျော့စားနဲ့ ရေကိုသုံးပြီး မျက်ခွံ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါ။
ဆပ်ပြာ အပျော့စားကို ရေနွေးနွေးနဲ့ ရောပါ။ အဝတ်စနဲ့ ဝါဂွမ်းသန့်သန့်ကို သုံးပြီး မျက်ခွံကို အသာအယာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါနော်။ မျက်စိစွံတာ မပျောက်မချင်း နေ့တိုင်း လုပ်ပေးလို့ရပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… မျက်ခွံကို နေ့တိုင်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးတာက မျက်စိမစွံအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ဆားရည်ကိုလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။ ဆားရည်က ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို ဖြိုခွဲပေးပြီး အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃) လက်ဖက်ခြောက်အိတ် သုံးပါ။
ရေနွေးဝတ် မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ လက်ဖက်ခြောက်အိတ်ကို သုံးကြည့်လို့ ရပါတယ်။ လက်ဖက်ခြောက်အိတ်က ရောင်ရမ်းတာကို သက်သာစေနိုင်ပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို သတ်ပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိလို့ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဒါဆို လက်ဖက်ခြောက်အိတ်ကို ဘယ်လို သုံးရမလဲ?? ပုံမှန်လက်ဖက်ရည်ကြမ်း လုပ်သလို ရေနွေးပူပူထဲ လက်ဖက်ခြောက်အိတ်ကို တစ်မိနစ်လောက် စိမ်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ လက်ဖက်ခြောက်အိတ်ကို အအေးခံပြီး မျက်လုံးပေါ်မှာ ငါးမိနစ်-ဆယ်မိနစ်လောက် ထားထားပါ။ ဒါဆို ရပါပြီနော်… မျက်လုံးတစ်ဖက်ချင်းစီအတွက် လက်ဖက်ခြောက်အိတ် တစ်ထုပ်စီ သုံးပေးပါ။
(၄) အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးသောက်ပါ။
မျက်စိစွံတာနာရင် အိုင်ဗျူပရိုဖန်၊ ပါရာစီတမောလိုမျိုး အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတွေ သောက်လို့ ရပါတယ်။ အရမ်း ဆိုးဆိုးရွားရွား နာနေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြသင့်ပါတယ်။
(၅) မိတ်ကပ် မလိမ်းပါနဲ့၊ မျက်ကပ်မှန် မတပ်ပါနဲ့။
မျက်စိစွံနေရင် မိတ်ကပ်မလိမ်းပါနဲ့ ယောင်းရေ… လှချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ မိတ်ကပ်က မျက်စိကို ပိုမိုထိခိုက်စေပြီး အနာကျက်နှေးစေလို့ပါနော်။ ပြီးတော့ ပိုဆိုးသွားနိုင်တာက မိတ်ကပ်ဆီကို ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ကူးသွားပြီး တခြားမျက်လုံးကို ကူးသွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်သေးတယ်လေ…
တကယ်လို့များ ယောင်းက မျက်ကပ်မှန်တပ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ မျက်စိစွံနေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ မျက်မှန်ပဲ တပ်ပေးပါနော်.. မျက်ကပ်မှန်ဆီ ဘက်တီးရီးယးတွေ ကပ်သွားပြီး ရောဂါပိုးကို ပိုပျံ့စေလို့ပါနော်..
လုပ်နေကျဖြစ်တဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးတာအပြင် မျက်လုံးအတွက် သုံးတဲ့မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း သုံးလ ကျော်တာနဲ့ ပစ်လိုက်တာမျိုး လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် ပိုပြီး သင့်လျော်ပါတယ်နော်…
(၆) ပိုးသတ်ဆေး လိမ်းဆေးတွေ လိမ်းပါ။
ဆေးဆိုင်တွေမှာ မျက်စိစွံတာအတွက် လိမ်းဆေးတွေ ဝယ်လို့ ရပါတယ်။ ဟင်.. မျက်လုံးထဲ လိမ်းဆေး ဘယ်လိုလိမ်းမလဲ ဆိုရင်တော့ မျက်ခွံကို အသာလေး မ၊ လိမ်းဆေး တစ်စိတ်လောက်ကို မျက်စိစွံတဲ့ မျက်ခွံအတွင်းဖက်မှာ လိမ်းပေးရင် ရပါတယ်နော်… မျက်စိစွံတာအတွက် စတီးရွိုက်ပါတဲ့ လိမ်းဆေးတွေက ဆိုးကျိုးများလို့ မလိမ်းတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ယောင်းရေ.. နောက်တစ်ခုကလေ လိမ်းဆေးဆိုတိုင်း တွေ့ကရာလိမ်းဆေး စွတ်မလိမ်းသင့်ပါနော်… မျက်စိအတွက် လိမ်းလို့ရတဲ့ လိမ်းဆေး ဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်လို့…
မျက်စိစွံတဲ့ မျက်ခွံပတ်ဝန်းကျင်ကို အသာအယာ နှိပ်နယ်ပေးမယ်ဆိုရင် မျက်လုံးက အညစ်အကြေးစွန့်ထုတ်မှုကို ပိုပြီး အားကောင်းစေပါတယ်နော်… (မျက်စွံဖုကို သွားနှိပ်ခိုင်းတာ၊ သွားညှစ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးနော်.. ) မျက်ခွံကို လက်သန့်သန့်နဲ့ နှိပ်ခိုင်းတာပါနော်.. ပြည်ရည်တွေ ထွက်လာပြီဆိုရင် အဝတ်စ သန့်သန့်နဲ့ သုတ်ပေးပြီး မျက်စိကို လက်နဲ့ ထပ်မကိုင်ပါနဲ့တော့.. မျက်ခွံတစ်ဝိုက် နှိပ်ရင်း နာလာရင် လုံးဝ လုံးဝ ဆက်မနှိပ်သင့်ပါနော် ယောင်းတို့…
(၈) ဆရာဝန်နှင့်ပြသ၍ ကုသမှုခံယူပါ။
မျက်စိစွံရောဂါပိုးအတွက် လိုအပ်လာတဲ့အခါ ပိုးသတ်ဆေးတွေ ဆရာဝန်က ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရောင်နေတာ သက်သာဖို့လည်း စတီးရွိုက်ပါတဲ့ ဆေးတွေ ညွှန်းပေးနိုင်ပါတယ်နော်… တကယ်လို့များ မျက်စိစွံတာက အတွင်းစွံဖြစ်နေတာမျိုး၊ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်တာမျိုး ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေကနေပြီး မျက်စိစွံတာကို စနစ်တကျ ဖောက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
Related Article >>> မျက်စိမထိခိုက်အောင် ကွန်ပျူတာကြည့်နည်း
အဲ.. ဖောက်တယ်ဆိုရင် မေးစရာက ဖြစ်လာပြီ။ မျက်စိစွံတာကို ညှစ်ထုတ်၊ ဖောက်ထုတ်လို့ ရတယ်ပေါ့???
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ မရဘူးလို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။ ညှစ်ထုတ်၊ ဖောက်ထုတ်လို့ ရနိုင်တဲ့ပုံ ပေါ်ပေမဲ့ ညှစ်ထုတ်လိုက်ရင် ထွက်လာတဲ့ ပြည်ရည်တွေကြောင့် ရောဂါပိုး ပို ပျံ့သွားနိုင်လို့ပါ။ မျက်စိစွံတဲ့အဖုက အတွင်းမှာ ပေါက်ပြီး အမြင်အာရုံ ထိခိုက်နေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး စနစ်တကျ ညှစ်ထုတ်လို့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖောက်ထုတ်ဖို့တော့ စိတ်ကူးတောင် မယဉ်လိုက်ပါနဲ့ ယောင်းတို့ရေ…
မျက်စိစွံတဲ့အဖုက ဝက်ခြံအဖုလိုပဲ တိုက်ရိုက် မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ရောဂါပိုးကြောင့် ရောင်ရမ်းတာမျိုးပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်အရည်ထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ အရမ်းများနေရင်တော့ နောက်ထပ် မျက်လုံးကို ဒါမှမဟုတ် အရေပြားရဲ့ တခြားနေရာတွေနဲ့ တခြားလူတွေဆီပါ ပျံ့သွားတတ်ပါတယ်။
မျက်စိစွံတာက တစ်ဖုဖြစ်ရင် နောက်ထပ် ထပ်ပွားနိုင်ခြေ များပါတယ်နော်… မျက်ခွံအတွင်းထဲမှာလည်း မျက်စိစွံနိုင်ပါသေးတယ်။
မျက်လုံးကို မကိုင်ခင် ဆပ်ပြာသုံးပြီး ရေနဲ့ လက်သေချာဆေးပါ။
မျက်ခွံတွေကို ရေနွေးနွေးနဲ့ ဆပ်ပြာအပျော့စားကို သုံးပြီး ဆေးပါ။
ညအိပ်ရာမဝင်ခင်တိုင်း မျက်လုံး မိတ်ကပ်ဖျက်ပါ။
မျက်စိစွံနေတဲ့လူနဲ့ တဘက်အတူတူ မသုံးမိပါစေနဲ့။
မျက်စိစွံသွားပြီဆိုရင်တော့ ရောင်ရမ်းတာက အနည်းဆုံး သုံးရက်လောက်ထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် အဖုက သူ့ဟာသူ ပေါက်ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်။ လုံးဝပျောက်သွားဖို့တော့ ခုနှစ်ရက် ကနေ ဆယ်ရက်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။
မျက်စိစွံတာက ဆိုးဆိုးရွားရွား ရောဂါ မဖြစ်တတ်ပေမဲ့ မျက်စိစွံတဲ့အဖုက အတွင်းမှာ ဖြစ်ရင်၊ တဖြည်းဖြည်းကြီးလာရင်၊ ပိုနာလာရင်၊ ဆယ်ရက်ကျော်တဲ့အထိ မသက်သာရင်၊ အမြင်အာရုံပါ ထိခိုက်လာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာပြသင့်ပါတယ်။ မျက်စိ ခဏခဏ စွံရင်လည်း မျက်ကြည်လွှာ ရောင်ရမ်းတာ၊ တစ်သျှူးရောင်ရမ်းတာတွေ ဖြစ်တတ်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါမယ်နော်…
ဒေါက်တာအိမ့် (ကျန်းကျန်းမာမာ by Alinker)
Reference : Health Line
လူတော့ စှံမစှံ မသိဘူး.. မကျြစိကတော့ အသစှေံတယျ -_-
မကျြစိစှံတယျဆိုတာ ဝကျခွံလို အနီရောငျအဖုက မကျြခှံပျေါမှာ ပျေါလာတာကို ချေါတာပါ။ မကျြခှံမှာ အထူးသဖွငျ့ မကျြတောငျမှေး ပတျဝနျးကငျြမှာ အဆီအိတျတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ အရပွေား ဆဲလျသတှေေ၊ ဖုနျမှုနျ့တှနေဲ့ အဆီတှေ စုလာရငျ အဆီအိတျတှကေို ပိတျမိသှားသလို ဖွဈတတျပါတယျ။ အဆီအိတျ ပိတျသှားရငျ ဘကျတီးရီးယားပိုးတှကေ အထဲမှာ ပေါကျပှားလာပွီး မကျြစိစှံလာတတျပါတယျ။
ကဲ.. ဒါဆို မကျြစိစှံရငျ ဘယျလို လက်ခဏာတှေ ခံစားရတတျလဲ???
မကျြစိစှံရငျ ခံစားရမယျ့ လက်ခဏာတှကေတော့-
မကျြခှံပတျဝနျးကငျြမှာ အဖတျတှေ ထှကျတာ
မကျြလုံးအောငျ့တာ၊ မကျြလုံးယားယံတာတှေ ဖွဈပါတယျ။
မကျြစိစှံတဲ့အဖုက မနာရငျ ရိုးရိုးအဆီအိတျ ပိတျတဲ့ မကျြစိစှံအဖုလိုပဲ ဖွဈဖို့ မြားပါတယျ။ မကျြစိစှံတာပဲဖွဈဖွဈ၊ မကျြစိအဆီအိတျ ပိတျတဲ့အဖုပဲဖွဈဖွဈ ကုသမှုက တူပမေဲ့ မကျြစိအဆီအိတျ ပိတျတဲ့အဖုက ပြောကျရတာ ပိုကွာတတျပါတယျ။
မကျြစိစှံတာကို အမွနျဆုံး သကျသာစနေိုငျမယျ့နညျးလမျးတှကေတော့-
မကျြစိစှံတာအတှကျ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးကတော့ရနှေေးဝတျ ကပျပေးတာပါ ယောငျးတို့ရေ… အပူကွောငျ့ ပွညျတှကေ မကျြခှံထိပျကို ရောကျလာပွီး ပွညျနဲ့ အဆီတှေ ရောသှားလို့ ပွညျရညျတှေ သူ့အလိုလို ထှကျသှားတတျပါတယျ။
ကဲ.. ဒါဆို ရနှေေးဝတျနဲ့ ဘယျလိုကပျကွမလဲ… အရငျဆုံး အဝတျကို ရနှေေးဆှတျတာက စရမှာပေါ့နျော။ ရနှေေးဆှတျတဲ့အခါ ရအေရမျးမပူအောငျ သတိထားပါနျော ယောငျး.. ပွီးတော့ အရမျးကွီး မရှဲစဘေဲ စိုရုံလောကျပဲ ဆှတျပေးရငျ ရပါပွီ။ အဲဒီ ရနှေေးဝတျလေးကို (၅)မိနဈ-(၁၀)မိနဈလောကျ မကျြလုံးပျေါမှာ အသာအယာ ကပျထားပါ။ သတိထားရမှာကလေ မကျြစိစှံတဲ့ ပွညျဖုကို ညှဈထုတျ၊ ဖောကျထုတျဖို့ မစဉျးစားပါနဲ့ ယောငျးရေ… ပိုးဝငျပွီး ပိုဆိုးသှားနိုငျလို့ပါနျော.. ဒီလို ရနှေေးဝတျကပျတာကို တဈနကေို့ သုံး၊ လေးကွိမျလောကျ လုပျလို့ ရပါတယျ။
(၂) ဆပျပွာအပြော့စားနဲ့ ရကေိုသုံးပွီး မကျြခှံ သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးပါ။
ဆပျပွာ အပြော့စားကို ရနှေေးနှေးနဲ့ ရောပါ။ အဝတျစနဲ့ ဝါဂှမျးသနျ့သနျ့ကို သုံးပွီး မကျြခှံကို အသာအယာ သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးပါနျော။ မကျြစိစှံတာ မပြောကျမခငျြး နတေို့ငျး လုပျပေးလို့ရပါတယျ ယောငျးတို့ရေ… မကျြခှံကို နတေို့ငျး သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးတာက မကျြစိမစှံအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ နောကျနညျးလမျးတဈခုကတော့ ဆားရညျကိုလညျး သုံးလို့ရပါတယျ။ ဆားရညျက ဘကျတီးရီးယားပိုးတှကေို ဖွိုခှဲပေးပွီး အညဈအကွေးတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။
(၃) လကျဖကျခွောကျအိတျ သုံးပါ။
ရနှေေးဝတျ မသုံးခငျြဘူးဆိုရငျတော့ လကျဖကျခွောကျအိတျကို သုံးကွညျ့လို့ ရပါတယျ။ လကျဖကျခွောကျအိတျက ရောငျရမျးတာကို သကျသာစနေိုငျပွီး ဘကျတီးရီးယားပိုးတှကေို သတျပေးနိုငျတဲ့ အာနိသငျရှိလို့ အကောငျးဆုံးပဲလို့ ဆိုကွပါတယျ။
ဒါဆို လကျဖကျခွောကျအိတျကို ဘယျလို သုံးရမလဲ?? ပုံမှနျလကျဖကျရညျကွမျး လုပျသလို ရနှေေးပူပူထဲ လကျဖကျခွောကျအိတျကို တဈမိနဈလောကျ စိမျထားလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ လကျဖကျခွောကျအိတျကို အအေးခံပွီး မကျြလုံးပျေါမှာ ငါးမိနဈ-ဆယျမိနဈလောကျ ထားထားပါ။ ဒါဆို ရပါပွီနျော… မကျြလုံးတဈဖကျခငျြးစီအတှကျ လကျဖကျခွောကျအိတျ တဈထုပျစီ သုံးပေးပါ။
(၄) အကိုကျအခဲ ပြောကျဆေးသောကျပါ။
မကျြစိစှံတာနာရငျ အိုငျဗြူပရိုဖနျ၊ ပါရာစီတမောလိုမြိုး အကိုကျအခဲ ပြောကျဆေးတှေ သောကျလို့ ရပါတယျ။ အရမျး ဆိုးဆိုးရှားရှား နာနရေငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ သှားပွသငျ့ပါတယျ။
(၅) မိတျကပျ မလိမျးပါနဲ့၊ မကျြကပျမှနျ မတပျပါနဲ့။
မကျြစိစှံနရေငျ မိတျကပျမလိမျးပါနဲ့ ယောငျးရေ… လှခငျြတယျဆိုပမေဲ့လို့ မိတျကပျက မကျြစိကို ပိုမိုထိခိုကျစပွေီး အနာကကျြနှေးစလေို့ပါနျော။ ပွီးတော့ ပိုဆိုးသှားနိုငျတာက မိတျကပျဆီကို ဘကျတီးရီးယားပိုးတှေ ကူးသှားပွီး တခွားမကျြလုံးကို ကူးသှားတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျသေးတယျလေ…
တကယျလို့မြား ယောငျးက မကျြကပျမှနျတပျတတျတယျဆိုရငျတော့ မကျြစိစှံနတေဲ့ အခြိနျအတှငျးမှာ မကျြမှနျပဲ တပျပေးပါနျော.. မကျြကပျမှနျဆီ ဘကျတီးရီးယးတှေ ကပျသှားပွီး ရောဂါပိုးကို ပိုပြံ့စလေို့ပါနျော..
လုပျနကေဖြွဈတဲ့ မိတျကပျပစ်စညျးတှကေို ပုံမှနျသနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးတာအပွငျ မကျြလုံးအတှကျ သုံးတဲ့မိတျကပျပစ်စညျးတှကေိုလညျး သုံးလ ကြျောတာနဲ့ ပဈလိုကျတာမြိုး လုပျပေးမယျဆိုရငျတော့ မကျြလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ ပိုပွီး သငျ့လြေျာပါတယျနျော…
(၆) ပိုးသတျဆေး လိမျးဆေးတှေ လိမျးပါ။
ဆေးဆိုငျတှမှော မကျြစိစှံတာအတှကျ လိမျးဆေးတှေ ဝယျလို့ ရပါတယျ။ ဟငျ.. မကျြလုံးထဲ လိမျးဆေး ဘယျလိုလိမျးမလဲ ဆိုရငျတော့ မကျြခှံကို အသာလေး မ၊ လိမျးဆေး တဈစိတျလောကျကို မကျြစိစှံတဲ့ မကျြခှံအတှငျးဖကျမှာ လိမျးပေးရငျ ရပါတယျနျော… မကျြစိစှံတာအတှကျ စတီးရှိုကျပါတဲ့ လိမျးဆေးတှကေ ဆိုးကြိုးမြားလို့ မလိမျးတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ ယောငျးရေ.. နောကျတဈခုကလေ လိမျးဆေးဆိုတိုငျး တှကေ့ရာလိမျးဆေး စှတျမလိမျးသငျ့ပါနျော… မကျြစိအတှကျ လိမျးလို့ရတဲ့ လိမျးဆေး ဖွဈနဖေို့ လိုပါတယျလို့…
မကျြစိစှံတဲ့ မကျြခှံပတျဝနျးကငျြကို အသာအယာ နှိပျနယျပေးမယျဆိုရငျ မကျြလုံးက အညဈအကွေးစှနျ့ထုတျမှုကို ပိုပွီး အားကောငျးစပေါတယျနျော… (မကျြစှံဖုကို သှားနှိပျခိုငျးတာ၊ သှားညှဈခိုငျးတာ မဟုတျဘူးနျော.. ) မကျြခှံကို လကျသနျ့သနျ့နဲ့ နှိပျခိုငျးတာပါနျော.. ပွညျရညျတှေ ထှကျလာပွီဆိုရငျ အဝတျစ သနျ့သနျ့နဲ့ သုတျပေးပွီး မကျြစိကို လကျနဲ့ ထပျမကိုငျပါနဲ့တော့.. မကျြခှံတဈဝိုကျ နှိပျရငျး နာလာရငျ လုံးဝ လုံးဝ ဆကျမနှိပျသငျ့ပါနျော ယောငျးတို့…
(၈) ဆရာဝနျနှငျ့ပွသ၍ ကုသမှုခံယူပါ။
မကျြစိစှံရောဂါပိုးအတှကျ လိုအပျလာတဲ့အခါ ပိုးသတျဆေးတှေ ဆရာဝနျက ပေးနိုငျပါတယျ။ ရောငျနတော သကျသာဖို့လညျး စတီးရှိုကျပါတဲ့ ဆေးတှေ ညှနျးပေးနိုငျပါတယျနျော… တကယျလို့မြား မကျြစိစှံတာက အတှငျးစှံဖွဈနတောမြိုး၊ အမွငျအာရုံကို ထိခိုကျတာမြိုး ဖွဈလာခဲ့ရငျ ကြှမျးကငျြဆရာဝနျတှကေနပွေီး မကျြစိစှံတာကို စနဈတကြ ဖောကျထုတျပေးနိုငျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
Related Article >>> မကျြစိမထိခိုကျအောငျ ကှနျပြူတာကွညျ့နညျး
အဲ.. ဖောကျတယျဆိုရငျ မေးစရာက ဖွဈလာပွီ။ မကျြစိစှံတာကို ညှဈထုတျ၊ ဖောကျထုတျလို့ ရတယျပေါ့???
ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ မရဘူးလို့ပဲ ဖွရေမှာပါ။ ညှဈထုတျ၊ ဖောကျထုတျလို့ ရနိုငျတဲ့ပုံ ပျေါပမေဲ့ ညှဈထုတျလိုကျရငျ ထှကျလာတဲ့ ပွညျရညျတှကွေောငျ့ ရောဂါပိုး ပို ပြံ့သှားနိုငျလို့ပါ။ မကျြစိစှံတဲ့အဖုက အတှငျးမှာ ပေါကျပွီး အမွငျအာရုံ ထိခိုကျနရေငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွီး စနဈတကြ ညှဈထုတျလို့ ရပါတယျ။ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဖောကျထုတျဖို့တော့ စိတျကူးတောငျ မယဉျလိုကျပါနဲ့ ယောငျးတို့ရေ…
မကျြစိစှံတဲ့အဖုက ဝကျခွံအဖုလိုပဲ တိုကျရိုကျ မကူးစကျနိုငျပါဘူး။ ဖွဈတဲ့နရောမှာ ရောဂါပိုးကွောငျ့ ရောငျရမျးတာမြိုးပဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပွညျအရညျထဲမှာ ဘကျတီးရီးယားပိုးတှေ အရမျးမြားနရေငျတော့ နောကျထပျ မကျြလုံးကို ဒါမှမဟုတျ အရပွေားရဲ့ တခွားနရောတှနေဲ့ တခွားလူတှဆေီပါ ပြံ့သှားတတျပါတယျ။
မကျြစိစှံတာက တဈဖုဖွဈရငျ နောကျထပျ ထပျပှားနိုငျခွေ မြားပါတယျနျော… မကျြခှံအတှငျးထဲမှာလညျး မကျြစိစှံနိုငျပါသေးတယျ။
မကျြလုံးကို မကိုငျခငျ ဆပျပွာသုံးပွီး ရနေဲ့ လကျသခြောဆေးပါ။
မကျြခှံတှကေို ရနှေေးနှေးနဲ့ ဆပျပွာအပြော့စားကို သုံးပွီး ဆေးပါ။
ညအိပျရာမဝငျခငျတိုငျး မကျြလုံး မိတျကပျဖကျြပါ။
မကျြစိစှံနတေဲ့လူနဲ့ တဘကျအတူတူ မသုံးမိပါစနေဲ့။
မကျြစိစှံသှားပွီဆိုရငျတော့ ရောငျရမျးတာက အနညျးဆုံး သုံးရကျလောကျထိ ကွာနိုငျပါတယျ။ ပွီးရငျ အဖုက သူ့ဟာသူ ပေါကျထှကျသှားနိုငျပါတယျ။ လုံးဝပြောကျသှားဖို့တော့ ခုနှဈရကျ ကနေ ဆယျရကျအထိ ကွာနိုငျပါတယျ။
မကျြစိစှံတာက ဆိုးဆိုးရှားရှား ရောဂါ မဖွဈတတျပမေဲ့ မကျြစိစှံတဲ့အဖုက အတှငျးမှာ ဖွဈရငျ၊ တဖွညျးဖွညျးကွီးလာရငျ၊ ပိုနာလာရငျ၊ ဆယျရကျကြျောတဲ့အထိ မသကျသာရငျ၊ အမွငျအာရုံပါ ထိခိုကျလာရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ သခြောပွသငျ့ပါတယျ။ မကျြစိ ခဏခဏ စှံရငျလညျး မကျြကွညျလှာ ရောငျရမျးတာ၊ တဈသြှူးရောငျရမျးတာတှေ ဖွဈတတျလို့ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျဖို့ လိုပါမယျနျော…
ဒေါကျတာအိမျ့ (ကနျြးကနျြးမာမာ by Alinker)
Tags: best, Cure, eye, Health, Prevent, release, Stye, ways